Middle Ear Infection (Otitis) (နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Middle Ear Infection (Otitis) (နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Middle Ear Infection (Otitis) (နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း)
Middle Ear Infection (Otitis) (နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. May Myat Hnin Aung ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
နားစည်အနောက်ပိုင်းရှိ တုန်ခါတတ်သော အရိုးကလေးများပါဝင်ပြီး လေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာကို နားအလယ်ပိုင်းဟု သတ်မှတ်ပါတယ်။ ထိုနေရာကို ဘက်တီးရီးယား သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ရောက်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ နားအလယ်ပိုင်းမှာ ရောင်ရမ်းပြီး အရည်တွေစုလာတဲ့အတွက် နာကျင်စေတတ်ပါတယ်။
Middle Ear Infection (Otitis) (နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကလေးတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Stanfordရှိ Lucile Packard ကလေးဆေးရုံမှ အချက်အလက်များအရ အသက်၃နှစ်ရှိတဲ့ ကလေး၈၀%မှာ ဖြစ်နေပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Middle Ear Infection (Otitis) (နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သင့်ဆီမှာအထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာမတူညီနိုင်ပါဘူး။
Middle Ear Infection (Otitis) (နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကလေးများမှာ နားအလယ်ပိုင်းရောဂါပိုးဝင်စေတဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ နဂိုရှိတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းမှ မြစ်ဖျားခံလာတာလည်း ဖြစ်နိင်ပါတယ်။ နားအလယ်ပိုင်းနဲ့ လည်ချောင်းကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ပြွန်ကလေးပိတ်လျှင်လည်း နားစည်အနောက်မှာ အရည်များစုလာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအရည်ထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ပေါက်ပွားပြီး နာကျင်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Middle Ear Infection (Otitis) (နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက်။ ၆လနှင့် ၂နှစ်အတွင်း ကလေးများမှာ နားအလယ်ပိုင်းနဲ့ လည်ချောင်းကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ပြွန်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ အရွယ်အစားကြောင့်၊ ခုခံအားစနစ်ကောင်းစွာ မဖွံ့ဖြိုးသေးခြင်းကြောင့် ရောဂါအဖြစ်နိုင်ဆုံး အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအများနှင့် အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း။ အိမ်မှာနေတဲ့ ကလေးများထက် အများနှင့် အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရတဲ့ကလေးများက အအေးမိခြင်း၊ နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတို့ ပိုဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
မွေးကင်းစကလေး နို့တိုက်ကျွေးခြင်း။ လှဲအိပ်နေစဉ် နို့ဘူးမှ နို့စို့တတ်သော ကလေးများသည် မိခင်နို့စို့သော ကလေးများထက် နားရောဂါပိုးဝင်လွယ်ပါတယ်။
ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အချက်များ။ အအေးမိခြင်း၊ တုပ်ကွေးတို့ အဖြစ်များတဲ့ ဆောင်းဦးနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ လေထဲက ဝတ်မှုန်အရေအတွက် ပိုများတဲ့အတွက် နားရောဂါပိုးဝင်လွယ်ပါတယ်။
လေထုအရည်အသွေးမကောင်းခြင်း။ ဆေးလိပ်ငွေ့နဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုများကြောင့် နားရောဂါပိုး ဝင်လွယ်ပါတယ်။
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများမရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ နားအလယ်ပိုင်းတွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းမဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာမှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Middle Ear Infection (Otitis) (နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က သင့်ကလေးရဲ့ ရောဂါရာဇဝင်ကို မေးမြန်းပြီး စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါမယ်။ စမ်းသပ်နေစဉ် နားအပြင်ပိုင်းနှင့် နားစည်ကို မီးလုံးပါသော နားကြည့်မှန်ပြောင်းကိရိယာဖြင့် နီရဲခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ပြည်နှင့် အရည်တို့ရှိ၊မရှိ ကြည့်ပါမယ်။
Tympanometry ဟုခေါ်သော နားအလယ်ပိုင်း အလုပ်လုပ်၊မလုပ် စမ်းသပ်မှုကိုလည်း ပြုလုပ်ပါမယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုမှာ သင့်နားထဲကို ကိရိယာတစ်ခုထည့်ပြီး ဖိအားကိုပြောင်းလဲစေပြီး နားစည်ကိုတုန်ခါစေပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုကို တိုင်းတာပြီး ဂရပ်တစ်ခုပေါ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က အဖြေကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Middle Ear Infection (Otitis) (နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသနည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်က ကလေးရဲ့ အသက်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ရောဂါရာဇဝင်ကို အခြေခံပြီး ကုသပေးပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါအချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။
မိဘများ၏ အကြိုက်နှင့် ရွေးချယ်မှု
ဆရာဝန်က ရောဂါပြင်းထန်မှုအလိုက် နာကျင်ခြင်းကို ကုသြင်္ပီး ပျောက်မပျောက် စောင့်ကြည့်တာအကောင်းဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါလိမ့်မယ်။ Ibuprofen သို့မဟုတ် အခြားအကိုက်အခဲနှင့် အဖျားပျောက်ဆေးများကို အနာပျောက်စေရန် အသုံးများပါတယ်။
၃ရက်ထက်ပိုကြာအောင် ရောဂါကိုခံစားနေရလျှင်တော့ ပဋိဇီဝဆေး လိုနေပါပြီ။ သို့ပေမယ့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းဆိုလျှင်တော့ ပဋိဇီဝဆေးနဲ့ ကုသနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် နားအလယ်ပိုင်းတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အအေးမိခြင်းနှင့် အခြားဖျားနာခြင်းများမှ ကာကွယ်ပါ။ ကလေးများအား လက်ကို သေသေချာချာ မကြာခဏဆေးဖို့နဲ့ စားသောက်ရာမှာသုံးတဲ့ ပစ္စည်းများ ဝေမျှမသုံးဖို့ သင်ပေးထားပါ။ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးလျှင် လက်မောင်းကွေးပြီးကာဖို့ သင်ထားပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကလေးအများနှင့် စောင့်ရှောက်သောနေရာတွင် သင့်ကလေးကို ထားသည့်အချိန်ကို ကန့်သတ်ထားပါ။ ကလေးပိုနည်းသည့် ကလေးထိန်းကျောင်းများက ပိုအဆင်ပြေသည်။ ကလေးဖျားလျှင် ကျောင်းမပို့ပါနှင့်။ တစ်ဆင့်ခံဆေးလိပ်ငွေ့ရှူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်စေပါ။ အပြင်သွားလျှင်လည်း ဆေးလိပ်ကင်းစင်သော နေရာများကိုသာ ခေါ်သွားပါ။
ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်ကျွေးပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် အနည်းဆုံး ၆လ မိခင်နို့ တိုက်ပါ။ မိခင်နို့ရည်တွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော ပဋိပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။
ကလေးကို နို့ဘူးတိုက်လျှင် မတ်မတ်ထားတိုက်ပါ။ ကလေးပတ်လက်လှဲနေစဉ် ပါးစပ်တွင် နို့ဘူးတပ်ပေးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကလေးကို ပုခက်ထဲထည့်လျက် နို့ဘူးမတိုက်ပါနှင့်။
ဆရာဝန်နှင့် ကာကွယ်ဆေးအကြောင်း ဆွေးနွေးပါ။ သင့်ကလေးအတွက် သင့်တော်သော ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းမေးပါ။ ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး၊ အဆုတ်ရောင်နှင့် အခြားဘက်တီးရီးယားပိုးများအတွက် ကာကွယ်ဆေးများက နားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
အကယ်၍သင့်မှာမေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်သင့်တော်တဲ့ အဖြေရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 12, 2018
Ear infection (middle ear). http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ear-infections/home/ovc-20199482. Accessed August 11, 2017.
Middle Ear Infection (Otitis). http://www.healthline.com/health/otitis#overview1. Accessed August 11, 2017.